Xalka dhibaatooyinka isku dhafan ee Mi Band 2 | Androidsis
Francisco Ruiz | | Tababarada, Xiaomi
Haddii aad haysato mid ka mid ah jijimooyinka Xiaomi Mi Band 2 oo aad si lama filaan ah u aragtay inaad haysato dhibaatooyin isku-dhafan oo u dhexeeya Mi Band 2 iyo terminaalkaaga Android, maqaalkani hubaal wuu fiicnaan doonaa adiga, waana taas adoo raacaya talaabooyinka aan halkaan ku sharaxayo, dhowr daqiiqo gudahood ayaad heli doontaa hagaaji dhibaatooyinka isku-dhafan ee Xiaomi Mi Band 2.
Marka xigta, marka laga reebo wuxuu ku siinayaa xalka dhibaatadan oo ka dhigi karta isticmaaleyaal badan inay quustaan jijimadan xiisaha leh ee dhaqdhaqaaqa jidhka iyo xakamaynta garaaca wadnaha, waxaan sidoo kale sharraxayaa sababta aan ula dhibaataysan nahay dhibaatooyinkan aadka u xun ee nagu hoggaaminaya inaynaan awood u lahayn inaynu u adeegsanno Mi Band 2 bartayada cusub ee cusub ee iftiinka leh ee 'Android' oo dhowaan la helay.
1 Cilad ku jirta qalabka qalabka wax lagu duubo ama cillad xagga qalabka ah?
2 Sidee loo hagaajiyaa dhibaatooyinka isuduwaha ee Mi Band 2
2.1 Ka soo deg Fix Mi Band 2 bilaash Google Play Store
2.2 Ka soo degso ogeysiis & jir-dhiska Mi Band Bilaash Google Play Store
3 Tallaabooyinka la raacayo si loo xalliyo dhibaatooyinka isku-dhafan ee Xiaomi Mi Band 2
Cilad ku jirta qalabka qalabka wax lagu duubo ama cillad xagga qalabka ah?
Qofka si lama filaan ah ula kulmay arintan dhibsada iyo Dhibaatada isku-dhafan ee isku-dhafan ee Xiaomi Mi Band 2Waa inaad ogaataa in tani mabda 'ahaan ay sabab u tahay qalad firmware ah oo loo soo sheegay Xiaomi iyo golayaasha taageerada rasmiga ah muddo dheer, qalad aan xilligan la helin xal ama jawaab, ugu yaraan si rasmi ah qayb ka mid ah shirkad weyn oo Shiine ah.
Dhibaatadu waxay tahay in markii Mi Band 2 lagu mideeyo aaladda Android iyada oo loo marayo codsiga rasmiga ah ee Xiaomi, barnaamijka loo yaqaan 'Mi Fit application', qalabka ayaa loo dejiyaa inuu yahay Tallaabada ah inaad ku xirto Mi Band 2 qalab kale oo kala duwan oo Android ah waa wax aan macquul aheyn.
Xitaa haddii aan xargaha ka jareyno codsiga rasmiga ah ee Xiaomi Mi Fit ka hor, wali kuma xirnaan doonto qalab cusub, iyo in ka badan oo inri iyo niyad jab ah haddii ay suurtagal tahay, sidoo kale looma oggolaan doono inaan ku xirno qalabkii uu markii hore ku xirnaa haddii aan ku sameynay dib-u-dejin warshad.
Jawaab la'aantan ka timid waddammada badan ee derbiga weyn ee Shiinaha iyo xaqiiqda ah in tani ay mar hore qaadatay waqti dheer, waxay dad badan ka dhigaysaa inay maleeyaan inay jiraan wax ka badan dhibaatada qalabka qalabka fudud oo ay tahay qalab dhibaato, taas oo aan shaqsi ahaan meesha waa ka saareysaa tan iyo haddii kale ma awoodi doonno Hagaaji Xiaomi Mi Band 2 Dhibaatada Isku-dhafan iyadoo la raacayo tilmaamaha fudud ee aan ku siinayo boostadan iyo adigoo ku rakibaya dhowr codsi oo aan ahayn Xiaomi.
Sidee loo hagaajiyaa dhibaatooyinka isuduwaha ee Mi Band 2
Si loo xaliyo dhibaatooyinkan isku dhafan ee xun ee Xiaomi Mi Band 2, waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa ka saar barnaamijka rasmiga ah ee Xiaomi Mi fit, furo Google Play Store oo orod si aad u soo dejiso labadan codsi oo aan uga tago wax ka hooseeya xariiqyadan.
Labadan codsi ee aan u baahan doonno oo ah kuwa noo oggolaan doona hagaaji dhibaatooyinka lammaanaha Xiaomi Mi Band 2, waa laba codsi oo ay soo saartay OneZeroBits waana wax layaableh in horumarayaasha ka baxsan Xiaomi ay xal u helaan ka hor inta aan soo saareyaasha jijin jimicsi dhaqdhaqaaqa iyo la socodka garaaca garaaca wadnaha iyo hurdada laftooda la socon.
Ka soo deg Fix Mi Band 2 bilaash Google Play Store
U hagaaji Mi Band 2
Ka soo degso ogeysiis & jir-dhiska Mi Band Bilaash Google Play Store
Ogeysiis & Caafimaad ahaaneed Mi Band
Tallaabooyinka la raacayo si loo xalliyo dhibaatooyinka isku-dhafan ee Xiaomi Mi Band 2
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno, sidaan ku soo sheegay dhowr sadar ka hor, waa inaan u dhaqaaqno dhammaystirka dhammaystirka ee rasmiga ah ee barnaamijka Xiaomi Mi Fit.
Marka tan la dhammeeyo, waxaan rakibay labada codsi ee aan soo sheegay, Fix for Mi Band 2 application iyo Ogeysiinta & Fitness for Mi Band, habka dib u soo kabashada shaqooyinka lumay ee Xiaomi Mi Band 2 waa sida ugu fudud ee fur Fix for Mi Band 2 arjiga, dhagsii badhanka Raadinta oo dhagsii badhanka oranaya Isku xidhka & Lammaanaha ama Isku xidhka oo iswaafaji.
Marka batoonka Isku xirka iyo iskuduwaha la riixo, waxaan kaliya u baahanahay xaqiiji isuduwaha adigoo riixaya badhanka kaliya ee jijimadda Xiaomi Mi Band 2Tan markaan aragno gariirka oo aan aragno in shaashada naloo sheegay inay tahay inaan badhanka riixno.
Ugu dambeyntiina, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan qaadno tallaabada saddexaad, taas oo aan ka badneyn dhagsii badhanka oranaya Open Notify App, badhanka wici doona arjiga labaad ee la rakibay, ogeysiis & Fitness for Mi Band, kaas oo noqon doona laga bilaabo hadda iyo ilaa Xiaomi ay si rasmi ah u xalinayso dhibaatadan isku-dhafan ee naloo soo bandhigay iyada oo loo marayo barnaamijka Mi Fit, codsiga aan u socono si loo isticmaalo in lagu fuliyo dhammaan kormeerka iyo xakamaynta xogta lagu qaatay jijin Xiaomi Mi Band 2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xalka dhibaatooyinka isku dhafan ee Mi Band 2
ok anigu ma haysto laakiin ok
Ujawaab Victor Valdiviezo
In kasta oo sharaxaadda oo dhan aanan sameyn karin, waxay i weydiineysaa cinwaanka Mac-da ee kooxdeyda 2 mana ogi sida iyo halka laga helo
Ku jawaab Naomi Galiano
Taasi waa, haddii aan beddelo taleefankayga. Miyaanan ku xidhi karin kooxdayda 2-ka terminal-kan cusub haddii aan horeba ugu lahaa mid kale?
Ku jawaab Geo
Dhibaatadaydu waxay tahay inaysan ku xirnayn hagaajinta-u ah barnaamijkeyga kooxda sidoo kale. Waan fahamsanahay inay tahay inaad wax ka beddesho qaabeynta taleefanka, maxaa yeelay waxay igu dhacdaa aniga oo leh 2 saacadood oo caqli-gal ah oo noocyo kala duwan leh oo leh 2 mobiles isku mid ah, laakiin ma garanayo meesha ... wax talo bixin ah?
Aad baad ugu mahadsantahay barnaamijka aad kugula talisay iyo sharaxaadda oo aad u fudud oo fudud oo aad ku dhiibtay boostadaada, kooxdayda 2 ayaa dib ugu soo noolaatay nolosha !!! Ku darsiga noocan ah ayaa la mahadiyey. . . Salaan iga timid Mexico
Jawaab Hector Manuel
Maanta waxaan helay cusbooneysiin ku saabsan arjiga rasmiga ah iyo cusbooneysiinta qalabka loo yaqaan 'Mi Band', laakiin nasiib darro intaas ka dib ma sii shaqeyneyso, waxaan isku dayay barnaamijyadan laakiin wax shaqeynaya ma jiraan.
Ku jawaab Rick
Waa salaaman tahay, waxaan kaaga waramayaa khibradeyda Xiaomi mi band 2 dugaag, markii ugu horreysay waxaan ka iibsaday barnaamijka mobilada, waa qalad, maadaama ay ka soo direen dibedda iyo Xiaomi Spain, wax fikrad ah kama lahan oo haddii ay halkaas ku noqdaan waa dhibaato.
La xiriirida mobilada, in kasta oo ay igu qaadatay maalin iyo badh, taabashada jijintii dhamaadka waxaan ku guuleystey inaan isku xiro, waxaan kugula talinayaa arjiga Xiaomi Mi Fit, maxaa yeelay way ka badan tahay intaas.
Waxaan kugula talin lahaa mar hadii arjiga la rakibo oo la iska diiwaangeliyo, anagoo jijinayna jijinka inta ugu badan oo la saarayo, dhaqaajinaya iyo Bluetooth, isku dayaya inaad ku xirto mobilada iyo arjiga labadaba, hadii aysan suurta gal ahayn, u daa ilaa isla jijimadu way isku xidhan tahay, waxay isku dayeysaa inay si joogto ah ula xiriirto mobilka.
Waxaan u maleynayaa inay dhibaatadu tahay sababta oo ah qalabka jijinimaddiisa oo aan la cusbooneysiin, laakiin ha ka welwelin mar haddii uu ku xiran yahay, way is cusbooneysiin doontaa.
Waxaan isku dayay inaan sameeyo dhamaan talaabooyinka lagu sharaxay maqaalka, sikastaba macquul maahan inay shaqeyso. Waan ka tirtiray arjiga rasmiga ah ee 'MiFit' taleefanka, waxaan rakibey kii ugu horeeyey, waxay ii soo baxday sidii inaan aqoonsaday inaan tirtiray barnaamijka rasmiga ah, laakiin markaan raadinayo, jijimadaydu waxay bilaabaysaa inay gariirto laakiin markii aan helo shilinta inaan si sax ah u cadaadiyey, Ma aqoonsani moobilka, sidaa darteed, waxay u eg tahay in iyadoon la isku xidhin. Waxaan isku dayay barnaamijyo kale lamana sameyn karo, waa quus, ma garanayo sida loo xaliyo tan !!!! Jijimadu wax yar uun bay jirtaa oo imika ma isticmaali karo, waxba iskama jaanqaadayso. Fadlan caawi
Waxaan ku hayaa taleefankayga gacanta, dhibaatadaydu waxay tahay in dhammaan aaladaha kale ee aan ku xiro bluhtoom ay ka baxayaan kantaroolka mana dhigi karo wicitaanka bluhtoom
Aad waxtar badan, aad baad u mahadsan tahay
Jawaab MARTA GARCIA DIAZ
Waxaan ku tijaabiyay aalado kale mana xirmayo. Labadaba BLE iyo Fix-u Mi Band 2 waxay helayaan jijin laakiin xilligan la isku daro, qalad ayaa muuqda.
Shaxda ayay ku ogaataa, laakiin kuma xirna.
Waan nadiifiyey kaydka nashqadeynta mana ogi waxa kale oo aan sameeyo. Jijimadu si fiican ayey u shaqeysaa (waxay xisaabisaa talaabooyinka, garaaca ...) laakiin ma xiriiriso.
Waan jeclaan lahaa wixii talo ah.
Aad baad u mahadsantahay, si sax ah ayey u shaqeysay.
salaan diiran oo ka timid Argentina.
Jawaab Anibal Julio Napolitano
Mahadsanid, wey ila shaqeysay.
Waan ku faraxsanahay Marco.
Waan sameeyay, mahadsanid !!
Ku jawaab Caro
Cilmiga guud Aad baad u mahadsantahay
Asus Zenfone 4 waxaa la soo bandhigi doonaa dhamaadka July